रिभल्वर (सिक्सर) पेस्तोल र लागुऔषध ब्राउन सुगरसहित तीन जना प्रहरीको नियन्त्रणमा::Daily Newspaper of Nepal
२५ भाद्र २०७६, बुधबार ०७:१३
रिभल्वर (सिक्सर) पेस्तोल र लागुऔषध ब्राउन सुगरसहित तीन जना प्रहरीको नियन्त्रणमा
सिरहा, २५ भदौ – सिरहाको दुई स्थानबाट प्रहरीले कटुवा पेस्तोल र लागुऔषध ब्राउन सुगरसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।विष्णपुर गाउँपालिका वडा नम्बर. ४ थलहाकट्हाका ३० वर्षीय कृष्ण यादवले घरायसी विवादका कारण आमालाई कुटपिट गरी घरको सामान बाहिर फालिदिएको खबर प्रहरी पाए पछी प्रहरी चौकी बेल्हाबाट घटनास्थलमा प्रहरी टोली पुगेको थियो ।
प्रहरी आएको थाहा पाउन साथ यादव कटुवा पेस्तोल छाडेर थिए। उनलाई सोही गाउँपालिका वडा नम्बर.५ स्थित लक्ष्मीपुरबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका सूचना अधिकारी तथा डीएसपी अपिलराज बोहराले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर. ६ बाट २१ वर्षीय राहुल भन्ने जीवछ साह र १९ वर्षीय राजन विश्वकर्मालाई लागुऔषध ब्राउन सुगरसहित प्रहरीले पक्राउ गरेका छन्। साहले घरको कोठाभित्र तरकारी बेच्ने क्यारेटमा बिक्री वितरणका लागि लुकाएर राखेको अवस्थामा प्रहरीले ब्राउन सुगर फेला पारेको बोहराले बताए। उनका अनुसार प्लाष्टिकको पोकामा तयार गरिएको ४ सय ५० ग्राम ब्राउन सुगर, मोबाइल र २३ सय रुपैयाँ नगदसहित दुवै जनालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान हुँदैछ।